चिकित्सक भन्छन्ः बजारका आँप किनेर खान हतारिनुहुँदैन समाचार . स्वास्थ्य . समाजबुधबार, असार १८, २०७६
यी हुन् सुन्धारा सुकाउने तीन कम्पनी अहिले सुन्धारामा धारा मात्रै छन्, धाराबाट पानी आउँदैन । सुन्धारामा घाँस उम्रिएको छ । कमिला हिँडिरहेको छ । अहिले सुन्धारको दृश्य पट्यारलाग्दो छ । पत्यारै लाग्दैन कि कुनै बेला यहाँ निरन्तर पानी आउँथ्यो । समाचारबुधबार, असार १८, २०७६
धन खायो सहकारीले, मन खायो गरिबीले धुमिल आँखा । सेताम्मे कपाल । अनुहारको छाला सोहोरिएर नाक र चिउडाको बीचमा केही गुजुमुजु परेको । दाँत सबै झरेर चुच्चो जस्तो देखिने अनुहार । छाला टासिएको हड्डी मात्रैको शरीर । तौल पनि धेरै थिएन होला । शरीर उभ्याउने पिँडुला पनि ठूला कहाँ थिए र ! त्यसैले उनी थरथर काम्दै उभिरहेकी थिइन् समाजसोमबार, असार १६, २०७६
‘मृत्युमार्ग’ बन्दै कलंकी–कोटेश्वर सडक फराकिलो र चिल्लो सडक । सडक दायाँबायाँ बगैंचा । दृश्यमा सुन्दर देखिन्छ, कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्ड । सडक निर्माणमा भएको त्रुटिका कारण उक्त सडकखण्ड ‘मृत्युमार्ग’ बनेको छ समाचारसोमबार, असार १६, २०७६
भीरमा सरकार ! भीमकाय चट्टानी पहाड । पहाडको फेदमा बगिरहेछ, ब्रम्हायणी नदी । पहाडको बीचमा पहरो काटेर बनाइएको सानो बाटो, त्यो पनि पैतला आधा मात्रै अट्ने ! थोरै रड्कियो भने ब्रम्हायणीमा पुगिन्छ । समाचारशनिबार, असार १४, २०७६
‘धर्तीमाता’को हर्कत रोक्ने प्रहरीलाई नै ‘देउता’ चढेपछि... थुनुवा कक्षअघि कामिरहेकी ती प्रहरी हबल्दार कक्षभित्र जान खोजिरहेकी थिइन् । जहाँ शुक्रबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेकी ‘धर्तीमाता’ लाई राखिएको थियो समाचारशुक्रबार, असार १३, २०७६
भीआईपीको ढुकुटी धन्दाः किन गराइन् सीताले १ करोड १५ लाखको चेक बाउन्स ? सीताले ती महिलाविरुद्ध १ करोड १५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स गराएकी छन् । यो रकम तीनजनाबाट विभिन्न मितिमा बाउन्स भएका छन् समाचारबुधबार, असार ११, २०७६
गाडी आयात नियन्त्रणका ठूला गफ, खाद्यान्न आयातको कहालीलाग्दो डाटा राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा ८४ अर्ब २० करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएको छ । यस्तै, गत वैशाखसम्ममा १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । समाचार . अर्थ नीतिबुधबार, असार ११, २०७६
के हुन् विप्लवका राजनीतिक एजेन्डा ? नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा अहिले सबैका लागि एक पहेली बनेको छ । कतिपयका लागि विप्लव नेतृत्वको पार्टी आतंकको पर्याय बन्दै छ । के नेकपा साँच्चै आतंकवादी पार्टी हो ? होइन भने किन बम पड्काउँदै हिँड्छन्, नेकपाका कार्यकर्ता ? के गर्न खोजेको हो विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ? समाचारबुधबार, असार ११, २०७६
भीआईपीको ढुकुटी धन्दाः सीता भन्छिन्– ढुकुटी होइन, घरायसी लेनदेन सीताले आफन्तलाई सापटी दिएको दाबी गरे पनि १ करोड रुपैयाँ बढी रकम कसरी उनले विभिन्न व्यक्तिलाई सापटी र ऋण दिइन् भन्ने विषयमा शिलापत्रले निरन्तर खोतल्ने प्रयास गरिरहेका बेला उनले ढुकुटीमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेकी हुन् समाचारसोमबार, असार ९, २०७६
नेकपा कार्यदिशाबारे दाहाल–पोखरेल घम्साघम्सी दाहालले पोखरेललाई 'तपाईंले जबज भन्दै भाषण गरेपछि आफूलाई अप्ठ्यारो' भएको बताएका थिए । जवाफमा पोखरलले दाहाललाई 'यस्तो बोल र उस्तो बोल भनेर नसिकाउन' भनेको ती नेताको दाबी छ समाचारसोमबार, असार ९, २०७६
मुम्बईका व्यापारीको २३ लाख ठगेर यसरी फरार भइन् डायना शुक्रबार बिहानै जैनलाई डायनाले फोन गरेर भनिन्, ‘दाइ मेरो दुबईबाट सुन आयो । ४० लाख चाहिएको छ । बुबासँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । हजुरले मिलाई दिनुपर्यो समाचारआईतबार, असार ८, २०७६
किन ‘फ्लप’ हुन्छन्, ट्राफिक प्रहरीका योजना ? नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले ल्याएका प्रायः नीति ‘फ्लप’ भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले निकै तामझामसाथ नयाँ नियम ल्याउँछ । कार्यान्वयनको प्रयास गर्छ । नयाँ नियम मान्न यात्रुलाई गाह्रो हुन्छ । नियमको विरोध हुन्छ । अनि, नियम त्यतिकै खारेज हुन्छ । समाचारआईतबार, असार ८, २०७६
भीआईपीको ढुकुटी धन्दाः आमा बेपत्ता, बाबु जेलमा, छोरीको बिचल्ली बानेश्वरमा भक्तपुरकी शान्ति प्रसाइको बुटिक पसल थियो । सोनीकी उनी बहिनीसमेत हुन् । त्यही बुटिकमाथिको तलामा एउटा कोठा खाली थियो । त्यहाँ २०–२२ जना महिला भेला हुन्थे । सुरुमा सबैलै ५० हजारको दरले १० लाख उठाए समाचार . समाजआईतबार, असार ८, २०७६
आफ्नै कारण मानिस नसर्ने रोगको सिकार बन्दै नसर्ने रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात, क्यान्सरलगायतका रोग पर्छन् । जसको प्रकोप पछिल्लो समय नेपालमा निकै बढेको छ । समयको परिवर्तनसँगै नेपालीको जीवनशैली पनि सहज हुँदै गएको छ । तर, सुखी जीवनशैली अपनाउने क्रममा मानिसले प्राणघातक नसर्ने रोग पनि पाल्दै छन् । जीवनशैली . स्वास्थ्यबिहिबार, असार ५, २०७६
भीआईपीको ढुकुटी धन्दाः लाखौं गयो, जेल पनि भयो आफैंले जम्मा गरेर ढुकुटी खेल्न थालेकी उनी बिस्तारै ऋणमा डुब्न थालिन् । ढुकुटी खेलाउने र खेल्ने क्रम बढ्दै गयो । बानेश्वरको बुटिकबाट खेल्न थालिएको ढुकुटी सीतापाइलास्थित सीता प्रसाईंकै घर र डिल्लीबजारमा रहेको बाबुराम कुँवरको अफिसमा समेत सुरु भयो समाचार . समाजबुधबार, असार ४, २०७६
महानगरले मेट्यो ‘नालायक म’ महानगरका भित्तामा अमृतवाणी लेख्नु परे पनि गायत्री मन्त्र लेख्नु परे पनि हाम्रो अनुमति लिनुपर्छ । हाम्रो स्वीकृति लिनुपर्छ समाचार . कला / साहित्य५ घण्टा